कास्की-२ मा पहिलेको भन्दा झण्डै ६ हजार मत कम खस्दा विद्या र खेमराज कसलाई मर्का पर्यो! - हिमाल दैनिक
कास्की-२ मा पहिलेको भन्दा झण्डै ६ हजार मत कम खस्दा विद्या र खेमराज कसलाई मर्का पर्यो!
१४ मंसिर २०७६, शनिबार १९:३३
शनिबार सम्पन्न उपनिर्वाचनको सबैभन्दा बढि चासोको केन्द्र बनेको कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा मतदाता संख्या बढेपनि मतदान भने करिब ६ हजारले कम खसेको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार, ७१ हजार ८ सय ७१ मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा शनिबार भएको मतदानमा जम्मा ४४ हजार २० मत खसेको प्रारम्भिक जानकारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पोखराले दिएको छ।
यो कुल मतदाताको जम्म ६१.२४ प्रतिशत मात्रै हो।
जब कि यसअघि सम्पन्न निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्या ७० हजार ६ सय ५१ रहेकोमा ४९ हजार ९ सय १३ अर्थात ७०.६ प्रतिशत मतदान भएको थियो। तर, यसपटक मतदाता संख्या १७ सय ८० ले बढेको थियो। यसका बाबजूद पनि उक्त क्षेत्रमा ठाउँ ठाउँमा बम विष्फोट हुँदा ५ हजार ८ सय ९३ मत कम खस्यो।
उक्त निर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पूर्वमन्त्री एवं सांसद रविन्द्र अधिकारीकी श्रीमती विद्या भट्टराईलाई मैदानमा उतारेको छ भने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कास्की कांग्रेसका पुराना नेता खेमराज पौडेललाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ।
मुख्यतय यी दुई उम्मेदवारबीच नै हुने प्रतिस्पर्धामा घटेको मतले कसलाई फाइदा र कसलाई नोक्सान पुर्याउला त्यो अबको केही घण्टाभित्रै सार्वजनिक हुने छ।
यसअघि सम्पन्न निर्वाचनमा पूर्वमन्त्री अधिकारीले २७ हजार २ सय ७ मत अर्थात ५६.१६ प्रतिशत मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका प्रतिद्धन्द्धी कांग्रेसका प्रखरवक्ता देवराज चालिसेले १८ हजार ६ सय ६१ मत पाएर पराजित भएका थिए।
कास्की जिल्ला प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा तार जालीले घेरेर सीसी क्यामेरा जडान गरिएको मतगणना स्थल तयारी अवस्थामा राखेको छ।
कार्यालयका अनुसार, साँझ ८ बजे सर्वदलीय बैठक पश्चात राती १० बजेबाटै मतगणना कार्य सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।
Prevपछिल्लो३७ जिल्लाका ५२ पदका लागि उपनिर्वाचन सम्पन्न, थबाङको १ मा नेकपाका वडाध्यक्ष विजयी
अघिल्लोकास्की -२ मा पुरुषभन्दा चार हजार बढि भोट महिलाले खसाए!Next